Caalamka, 23 March 2019
Ururka Islaamka oo ka shirey xasuuqii Masaajidda ee New Zealand
Waddamada ku bahoobay ururka Iskaashiga Islamka (OIC) ayaa shir deg deg ah ku yeeshay maanta magaalada Istanbul, ee dalka Turkiga, kaas oo ay kaga arrinsadeen xasuuqii dad ku cibaadeysanayay masaajiddo ku yaalla New Zealand loogu geystay Jimcihii hore.
New Zealand oo mamnuucday hubka daran-dooriga
Ku dhowaad toddobaad kadib markii 50 qof oo muslimiin ah lagu dilay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, ra’iisul wasaaraha dalkaas, Jacinda Ardern ayaa maanta sheegtay in dhammaan qoryaha kuwa milatariga oo kale iyo kuwa sida daran-dooriga u dhaca la mamnuucay.
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erodgan ayaa dalbaday In New Zealand ay dib usoo celiso xukunnada dilka ee dalkaas, islamarkaana ay ku qaado Brenton Tarrant ah ninkii 50 qof ee muslimiinta ah ku dilay masaajiddo ku yaalla magaalada Christchurch.
Aaska muslimiinti lagu dilay New Zealand oo billowday
Labo ka mid ah Muslimiinti Jimcihi lagu laayay dalka New Zealand ayaa Arbacada maanta ah la aasay, taasoo noqoneysa aaski ugu horreeyay ee loo sameeyay 49-ka qof ee lagu dilay laba masaajiid oo ku yaalla magaalada Christchurch.
Erdogan: Istanbul ma noqon doonto Constantinople
Madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday laba masjid oo ku yaalla dalka New Zealand uu qeyb ka ahaa howl-gal ballaaran oo lagu bartilmaameedsanayey Turkey.
Ciidamada Kenya oo ka baxay Buusaar
Ciidamada Kenya ayaa ka baxay Deegaanka Buusaar ee hoostago degmada Ceel-Waaq ee gobolka Gedo halkaasoo ay haysteen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Doorashada Netherlands - Soomaali u tartamaysa kuraas
Toogasho ka dhacday magaalada Utrecht, Netherlands
Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada Utrecht ee dalka Netherlands kadib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay goob laga raaco tareenada.
Xeerarka hubka New Zealand oo la beddelayo
Ammaanka Masaajidda W/Ameerika oo la adkeeyey
Masaajid badan oo ku yaalla wadamada Yurub iyo Waqooyiga America ayaa qaadey tallaabooyin ay kaga hor-tagayaan in weerar lala beegsado kadib weerar lagu qaaday masjid ku yaalla dalka New Zealand.
Madaxda dunida oo ka fal-celiyey weerarka New Zealand
Weerar argagixiso oo lagu qaaday laba masjid oo ku yaalla dalka New Zealand, kuwaas oo lagu dilay ugu yaraan 49 qof, ayaa argagax, carro iyo lama filaan ka abuuray dunida.